मोटोपनासँग कसरी लड्ने ? विज्ञहरूको ५ सूजाब - NepalDainik
मोटोपनासँग कसरी लड्ने ? विज्ञहरूको ५ सूजाब
मोटोपना शरीरको एक अवस्था हो जहाँ अत्यधिक मात्रामा बोसो जम्मा हुन्छ। कस्मेटिक अवस्था हुनुको अलावा, यसले हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, र केहि अवस्थामा विभिन्न प्रकारका क्यान्सरहरू समावेश गर्ने र अन्य स्वास्थ्य जोखिमहरू पनि निम्त्याउँछ। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा, मोटोपन र अधिक तौल बढ्दो चिन्ताहरू छन् जुन वर्षौंको दौडान द्रुत गतिमा बढ्दै गएको देखिन्छ। यद्यपि। मोटोपना उल्टो हुन्छ। एचटी(HT) लाइफस्टाइलसँगको अन्तर्वार्तामा, मेडल हेल्थकेयरका कन्सल्टेन्ट फेमिली फिजिसियन सुदर्शन एसले भने, “तपाईले उचित जीवनशैली अपनाउनुभयो र स्वस्थ आहार उपभोग गर्नुभयो भने मोटोपना रोक्न सकिने र उल्टाउन सकिने छ। निस्सन्देह मोटोपनाको उपचार गर्न नवीनतम चिकित्सा र सर्जिकल उपचारहरू उपलब्ध छन्, तर यदि हामीले जीवन शैली छनोटहरू परिवर्तन गरेर आफ्नै लागि अलिकति केहिँ गर्छौं भने हामी मोटोपनालाई स्वाभाविक रूपमा जित्न सक्छौं।"
दिनको ४५ मिनेटको व्यायामदेखि लिएर तनावबाट बच्नको लागि शरीरलाई पर्याप्त आराम प्रदान गर्न, मोटोपना र अधिक तौलसँग लड्नका लागि जीवन शैलीमा चाहिने पाँचवटा परिवर्तनहरू :
स्वस्थकर खाना खानुहोस्: प्रशोधित कार्बोहाइड्रेट, चिनी र गहिरो भुटेको खानेकुरा भएका खानेकुराहरू होशियारीपूर्वक त्याग्नु पर्छ । शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध गराउन हरियो सागसब्जीको बढी सेवन गर्नु पर्छ ।
व्यायाम: दिनमा कम्तिमा ४५ मिनेट व्यायाममा समर्पित हुनुपर्छ। "व्यायामले तपाईंको मांसपेशीलाई टोन बनाउँछ र यसले पेटको बोसो घटाउनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। शरीरको तौल घटाउनका लागि कार्डियो र तौल प्रशिक्षण अभ्यासको संयोजन राम्रो हुन्छ ।
धुम्रपान, मदिरा सेवन नगर्नुहोस्: धुम्रपान र मदिराको सेवनले शरीरमा गम्भीर प्रतिकूल असर पुर्‍याउँछ। रक्सीले सीधै कलेजोलाई असर गर्छ, जबकि धुम्रपानले मोटोपनासँग सम्बन्धित पहिले नै विद्यमान जटिलताहरू जस्तै हृदय रोग र क्यान्सरलाई थप्छ।
७-८ घण्टाको निद्रा: मेटाबोलिक सन्तुलन प्राप्त गर्न र दैनिक आधारमा राम्रोसँग काम गर्न हाम्रो शरीरलाई पर्याप्त मात्रामा निद्रा र आराम चाहिन्छ।
तनावबाट बच्नुहोस्: तनावले धेरै खानेकुरा निम्त्याउँछ। तनावसँग जुध्ने वैकल्पिक उपायहरू खोज्नुपर्छ जस्तै- ध्यान र योग पनि गर्न सकिन्छ।
PrevPreviousसत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनको कुनै विचार, सिद्धान्त छैन -उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल
Nextताइवानमा ६.१ म्याग्निच्युडको भूकम्पNext